Sapanca Kırkpınar Teleferik စီမံကိန်းရပ်တန့် | | RayHaber | raillynews
[22 / 02 / 2020] အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားကိုမေလ ၂၉ ရက်တွင်စမ်းသပ်မည်	54 Sakarya
[22 / 02 / 2020] Bursa မှရောက်ရှိလာသည့်ပြည်တွင်း Tram Panorama သည်ပိုလန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်	16 Bursa
[22 / 02 / 2020] Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Pass Pass အာမခံ .. .. ! ဘဏ္8ာရေးသည်ယာဉ် ၈ စီးအားငွေပေးချေလိမ့်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[22 / 02 / 2020] KonyaRay လမ်းကြောင်းနှင့်မှတ်တိုင်များ	42 Konya
[21 / 02 / 2020] GISIAD မှ Giresun Island ကြိုးနှင့် Marina စီမံကိန်း	28 Giresun
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 SakaryaSapanca Kırkpınar Teleferik စီမံကိန်းရပ်နားသည်
Sapanca Kırkpınar Teleferik စီမံကိန်းရပ်နားသည်
23 / 11 / 2019 54 Sakarya, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, TELPHER
sapanca kirkpinar ropeway စီမံကိန်းအလုပ်များရပ်နေသည်
Sapanca Kırkpınar Teleferik စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရပ်တန့်; Sakarya မြို့၏မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüceနှင့်လူထုတွေ့ဆုံမှုတွင်အဖြေတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ biz မင်းမလိုချင်တာကိုမင်းမလိုချင်ဘူး။ ကျနော်တို့အဖြေထွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ "
Sapanca Kırkpınar Teleferic စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်Hasanpaşaတွင်နေထိုင်သူများသည်3လအတွက်ရုန်းကန်မှုကိုအောင်ပွဲခံခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüceကဒီလုပ်ငန်းကိုရပ်တန့်မယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Ropeway စီမံကိန်းကိုပြုလုပ်မည့်ဒေသရှိသစ်ပင်များကိုဖျက်သိမ်းသည့်အချိန်တွင်မြို့တော်ဝန်နှင့်မြို့တော်ဝန်များကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သူများသည်သေဆုံးခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးtoရိယာသို့ထွက်ခွာသွားသူများ၏တုံ့ပြန်မှုတွင် Sapanca ၏မြို့တော်ဝန်သည်သောင်းကျန်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံရာ၌မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüceနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟုသူကဆိုသည်။ ဤအစည်းအဝေးပြီးနောက်Özenသည်သောကြာနေ့တွင်2သည်Hasanpaşaရှိဒေသခံများအားလာရောက်လည်ပတ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားများသည် Ekrem Yüceတစ်နေ့လုံးအေးခဲလာမည်ကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ မီးပူလောင်နေသော Hasanpasa Yuce ၏နေထိုင်သူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် Sapanca မြူနီစီပယ်သည် 10 လူများကိုမြို့တော်ခန်းမသို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟုသတင်းများကဆိုသည်။ နံပါတ်ကန့်သတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်သောနိုင်ငံသားများသည်ရုံးသို့ စုပေါင်း၍ Ropeway Project ကိုမလိုလားကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Metropolitan မြူနီစီပယ်၏မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüceက - üzerineငါတို့လိုချင်တာကိုမလိုချင်ဘူး၊ ဖြေရှင်းနည်းကိုသွားမယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ " Hasanpaşalarအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအဆောက်အ ဦး ထားခဲ့တယ်။
နိုးနိုးကြားကြားKırkpınar Sapanca ကေဘယ်လ်ကား!
Sivas, တူရကီ YHT Project ထဲတွင်တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်
İneboluဆိပ်ကမ်း 24 နှစ်ပေါင်းကေဘယ်လ်ကားလိုင်းတစ်ခွင်ဆိုင်းငံ့
İneboluဆိပ်ကမ်း 24 နှစ်ပေါင်းတစ်ခွင်ဆွဲထား cable ကိုကားတစ်စီးလုပ်
Sapanca Teleferic စီမံကိန်း EIA အစီရင်ခံစာတောင်းဆိုချက်
Adapazarı-Pendik မင်Köseköyနှင့် b.derbent အတွက်ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားရပ်နားမှုများ
အလုပ် Sapanca အတွက်နှင်းလျှောစီး LIFT စေရန်စတင်
Kırkpınarအတွက် cable ကိုတင်းမာမှု
မင်္ဂလာအဆုံးသတ်ရေး Kastamonu Ropeway Project မှရောက်ရှိ
Babadag ပေးပို့ cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းတွင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်
TCDD Istanbul - Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း Geyve - Sapanca (DoğançayRipajı) …
Sapanca Ropeway စီမံကိန်း
Düzce၏ Nostalgic Tram ဘယ်မှာသွားသလဲ။
North Forest Subscription: Sapanca Ropeway Project | ရေးပါအရှင်ဘုရား၊
ဖေဖော်ဝါရီလ 23 1942 အဆိုပါ Iskenderun ဆိပ်ကမ်း: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
Davraz နှင်းလျှောစီးစင်တာတွင်လုပ် Avalanche Drill
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားကိုမေလ ၂၉ ရက်တွင်စမ်းသပ်မည်
Bursa မှရောက်ရှိလာသည့်ပြည်တွင်း Tram Panorama သည်ပိုလန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Pass Pass အာမခံ .. .. ! ဘဏ္8ာရေးသည်ယာဉ် ၈ စီးအားငွေပေးချေလိမ့်မည်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၁၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်၊ ယေရုရှလင်ဌာနခွဲ
Kayaş Kayseri မီးရထားလမ်းတွင်စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်းများသက်တမ်းတိုးခြင်း
Irmak Zonguldak လိုင်းတွင်ကွန်ကရစ်နံရံများတည်ဆောက်ခြင်း
Ankara Kayseri မီးရထားလမ်းပေါ်ရှိလူကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
Irmak Zonguldak လိုင်းပေါ် Hydraulic Grille တင်ဒါရလဒ်
Irmak Zonguldak မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
Irmak Zonguldak လိုင်းမှတင်ဒါရလဒ်
«	ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 »
တင်ဒါကြေငြာချက် - Maintenance and Repair ဝန်ဆောင်မှုကို Istanbul Metro Lines တွင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်
25: ဖေဖော်ဝါရီလ 10 00 @ - 11: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - R350HT 60E1 မီးရထားကိုဝယ်မည်
25: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 00 @ - 15: 00
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: B70 ကြိုတင်ဆွဲ - pre- ဆွဲထုတ်ကွန်ကရစ် Crossmember ဝယ်ယူမှု
တင်ဒါကြေငြာချက် - Manisa-Bandırmaမီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
26: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လှေငြိမ် Buy ပါလိမ့်မယ်
တင်ဒါကြေငြာချက် - Ankaray စက်ရုံ၏ရထား Subframe Beam ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း
27: ဖေဖော်ဝါရီလ 15 00 @ - 16: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Metro အလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır
28: ဖေဖော်ဝါရီလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
2: မတ်လ 10 00 @ - 11: 00
TCDD Tasimacilik 184 အလုပ်အကိုင်ကိုနှုတ်ဖြင့်စစ်ဆေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူများစာရင်း
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနမှလေယာဉ်မှူးနှင့်စက်ယန္တရားများဝယ်ယူရန်
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ထမ်း ၈၈၄၄ ဦး ခန့်အပ်ရန်ခန့်ထားခြင်း
အဘယ်ကြောင့် TCDD 356 စုဆောင်းမှုခံတွင်းစာမေးပွဲရလဒ်များကိုထုတ်ဖော်မပေးသနည်း
ESTRAM 48 ဘတ်စ်ကားမောင်းသူကိုခေါ်ဆောင်သွားမည်
GISIAD မှ Giresun Island ကြိုးနှင့် Marina စီမံကိန်း
သင်ဟာကြာကြာမနေပဲ၊ စုံတွဲများရဲ့ Toboggan ပြိုင်ပွဲဟာ Erciyes မှာ ၆ ကြိမ်မြောက်ရောက်နေပြီ
Kaymakli မှအမျိုးသမီးများသည် Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာကိုခံစားပါ
Afyonkarahisar Castle Cable Car တင်ဒါနောက်ဆုံးနိဂုံး
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများကို Akhisar တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်
Creekark Creek Bridge နှင့် Double Road အတွက်လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်
Gunsel B9 ကို TRNC ၏အိမ်တွင်းကားကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Melစတြေးလျတွင်ဆစ်ဒနီမဲလ်ဘုန်းရထား ၂ စီးသေဆုံး
နိုင်ငံသားများသည် Marmaray လေ့လာရေးခရီး ၂၄ နာရီလိုသည်
သင်တန်းသား ၁၀၉ ဦး အတွက်သင်တန်းများ Istanbul တွင်စတင်ခဲ့သည်
ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်မည်
ဒေသဆိုင်ရာကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ၁၀ နိုင်ငံဆက်သွယ်ခဲ့သည်
Coronavirus အိမ်တွင်းကားရေကြီးမှု TOGG ၏အစီအစဉ်များ
၀ န်ကြီး Varank: ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ector၏အနာဂတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်
IETT - Metrobus တိုင်ကြားချက်လျှောက်လွှာများကို ၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လျော့ချခဲ့သည်
Leon Cupra 2020 ဘူတာရုံကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
TRNC ၏ပြည်တွင်းကားGünsel B9 ကိုဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
BMW Izmir မှတရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
BMW Ankara ၏တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
BMW İstanbulတရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
☞ ဘာကွောငျ့ RayHaber?
အီးမေးလ်က: ဆက်သွယ်ရေး @rayhaber.com
အရှေ့ Express လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 2020
KONYARAY ရထားလိုင်းအတွက်လက်မှတ်ထိုးသည် .. ! ဒီတော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်
၂၀၂၀ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ YHT Expedition နာရီလစဉ်ကြေးပေးသွင်းခ